Tantara tranainy :: Hita any amin’ny toeram-pivarotam- boky ny « Antananarivo Fahizay » • AoRaha
Tantara tranainy Hita any amin’ny toeram-pivarotam- boky ny « Antananarivo Fahizay »
Raki-pahalalana novolavolaina tany amin’ny sivifolo taona lasa. Efa hita ao amin’ny toeram-pivarotana boky, etsy amin’ny Mozea ho an’ny saripaka Anjohy (Musée de la photographie de Madagascar) ny «Antananarivo Fahizay», nosoratan-Rainitovo.
Ampahafantariny ao anatin’ny boky ny tantaran’ny Antananarivo tany am-piandohana, izay nantsoina hoe “Vohitsara”.
Resahiny ao avokoa, na fomba na toetra amam-panaon’ireo olona teto Imerina hatramin’ny haiady fanaon’ny tanora tamin’izany fotoana izany. Marihina fa vitsy ny tranomboky nahatahiry ny « Antananarivo Fahizay ».
Betsaka ny olona tsy mahafantatra an-dRainitovo. Teraka tamin’ny taona 1852 ity mpanoratra nivezivezy nitety toerana maro ity. Niainga teto Antananarivo izy, nandalo tao Antsirabe ka tonga hatrany Ambositra. Fantatra tamin’ny fanangonana angano sy ohabolana malagasy navoakany tamina gazety maro Rainitovo. Fanta-daza tamin’ny fandalinana ny tantara ihany koa izy.
Na efa nandroso taona aza, dia nanoratra ny boky « Antananarivo Fahizay » tamin’ny taona 1928 ny lehilahy. Roa taona taorian’izay, no namoahany indray ny “Tantaran’ny Malagasy manontolo”. Ampahafantariny ao avokoa ny tantaran’ny Malagasy. Loharano sy vatsy mafonja ho an’ny mpikaroka ireo boky ireo, ankehitriny.
Fizarana traikefa momba ny dihy :: Manokatra varavarana ho an’ ny famoronana ny « Labdihy »